पीएसएल टी-ट्वान्टीका लागि सन्दीप कराँची प्रस्थान ! « MNTVONLINE.COM
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) खेल्न आज त्यसतर्फ गएका छन् । उनले लाहोर कलन्दर्सबाट प्रतियोगिता खेल्नेछन् ।
उनका स्थानमा लाहोरले लामिछानेलाई छनोट गरेको हो । लामिछाने कतार एअरवेजमार्फत दोहा हुँदै कराँचीतर्फ गएका हुन् । यसअघि लामिछाने पिएसएलको ड्राफ्टमा सर्वाधिक महँगो प्लाटिनम श्रेणीमा रहेका थिए । उक्त ड्राफ्टमा नेपालबाट उहाँसहित पूर्वकप्तान पारस खड्का, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, कुशल मल्ल, अभिनास बोहोरा, पवन सर्राफ, सुवास खकुरेल र आसिफ शेख समावेश भएका थिए ।
लाहोर कलन्दर्सले जारी प्रतियोगितामका तीन खेलमा दुईमा जीत तथा एकमा हार बेहोरेको छ । लाहोर कलन्दर्स लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । लामिछानेले यसअघि सन् २०१९ मा पनि लाहोरबाट नै खेलेका थिए । सन्दीपले सात खेलमा ११ विकेट लिएका थिए । सन् २०२० मा भने उनले पिएसएल खेल्न पाएनन् ।
मलेसियामाथि नेपालको शानदार जीत, कुशलको अर्को विष्फोटक ब्याटिङ
ग्रेस न्याभ कप गल्फ २०२१ को उपाधि प्रज्ञा तामाङलाई (फोटोफिचरसहित)
मेसीको कप्तानीमा बार्सिलोनाले जित्यो पहिलो उपाधि
आइपीएलः हैदरावादको लगातार तेस्रो हार !
नेदरल्याण्ड्समाथि नेपालको शानदार जीत, डेब्यु खेलमै कुशलको अर्धशतक
आइपिएलः चेन्नाईसँग पञ्जाब ६ विकेटले पराजित !